Mumwe muvashanu Brits aigona kushanda mu porn kana mubhadharo waive wakanaka uye basa rakanga rakachengeteka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Mumwe muvashanu Brits aigona kushanda mu porn kana mubhadharo waive wakanaka uye basa rakanga rakachengeteka
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • dzidzo • Fashoni Nhau • mafirimu • Health News • Kodzero Dzevanhu • mumhanzi • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kugamuchirwa kwakakurumbira kwenzira yebasa yaimboonekwa seyakasimba taboo yakangokura nekukasira uye kumiganhu, ichidonhedza muchikoro chevakuru uye ichigadzira mafoni ekugadzirwa kwe "yekupinda-nhanho yepabonde" yevechidiki.
Vechidiki vainyanya kufunga nezvekupinda muindasitiri yezvinonyadzisira, nepo vangori 8% yeavo vanopfuura makumi mashanu nemashanu vaifunga shanduko yakadaro.
Vanopfuura chetatu (34%) vakaona zvinonyadzisira, zvaimboonekwa sekunyadzisa, se "chikamu chinogamuchirwa chevanhu venhasi."
Ongororo nyowani yakawana kuti vangangoita makumi maviri muzana maBritish vaizopinda basa rekuona zvinonyadzisira, chero bedzi muripo wezvemari wanga wakakwana zvakakwana uye nharaunda yekushanda yakachengeteka.
19% yevakuru veBritish vachiti ivo vanofunga kuzoshanda muindasitiri yezvinonyadzisira zvinoratidza kuti kuita bonde kwave "kunogamuchirwa" chikamu chevanhu.
Zvinoenderana nezvabuda musarudzo, 34% yevakuru veBritain vakaona zvinonyadzisira, zvaimboonekwa sekunyadzisa, se "chikamu chinogamuchirwa munharaunda yazvino."
Sezviri pachena, vechidiki vechidiki vaive nemukana wekufunga nezve kupinda mu Porn indasitiri - 32% yeavo vane makore 18 kusvika 34 vaizvifunga - nepo vangori 8% yeavo vanopfuura makore makumi mashanu nemashanu vakanga vafunga shanduko yakadaro yebasa.
Kunyangwe paine maitiro akajeka kuvhura indasitiri iyi, zvakadaro, vangangopfuura hafu (51%) yevakabvunzwa vakapindura vakabvuma kuti vangangonetsekana kana vakawana nhengo yemhuri yechikuru ichigadzira zvirimo zvinotengeswa panzvimbo dzakaita seShubhubhub kana VaFeFans chete.
Pakati peavo vari pasi pemakore makumi matatu nemashanu, 35% chete ndivo vangangodaro vachishushikana nezvakadai, nepo 41% yeavo vanopfuura makore 59 vaizozviona zvichikonzera kunetseka.
Ongororo yevakuru mazana maviri nemakumi masere anegumi nenomwe ekuBritain yakapihwa basa nekurwisa zvinonyadzisira charity the Naked Chokwadi Project, izvo zvakadaidza mhedzisiro yekuvhotesa kuvhiringidza, nekucherechedza kuti kuwedzera kwekuziva kwekuti vangani vanoita "vatambi" vanotengeswa nekutorerwa vasingadi kwavo zvinoita kunge kusiri kududzira vanhu vachizviparadzanisa kubva indasitiri.
"Kune vanhu veese mazera vari kuwana zviri pachena zvirimo nguva nenguva - zvirimo izvo zvine chinobatika uye chinokanganisa hukama, hukama hwepfungwa uye kuzvikoshesa kwevaoni pamwe nevaya vanoshanda muindasitiri," Yakashama Chokwadi Chirongwa muvambi, Ian Henderson, akadaro, achitsanangura kupararira kwehupombwe mukati mehupenyu hwese.
Uye kugamuchirwa kwakakurumbira kwenzira yebasa yaimboonekwa seyakasimba taboo yakangokura chete nekusvetuka, ichidonhedza muchikoro chevakuru uye ichigadzira mafoni ekugadzirwa kwe "yekupinda-nhanho yepabonde" yevechidiki.
Nepo nzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzinogamuchira zvinonyadzisira zvinhu - kubva kuMindGeek's indasitiri-inotonga network yemasaiti ezvinonyadzisira kusvika OnlyFans'ichangoburwa asi yakapinda zvine mutsindo kupinda muindasitiri - dzimwe nguva inoitirwa kushorwa nemauto ekunze sema processor ekubhadhara kana webhu inomiririra, dzimwe nguva kutyisidzira hakuna kuita zvishoma kutadzisa indasitiri iri kuwedzera.
Kunyanya, izvi zvipingamupinyi zvakakonzera zvimwe zvidiki uye dzimwe nguva zvenguva pfupi-maitiro maitiro. Mushure mekupomedzerwa mhosva yekuwandisa kweanonyadzisira uye mavhidhiyo ekubata chibharo gore rapfuura, Pornhub yakagadzirisa mutemo wayo, ichibvumira chete vavhoti uye vakavimbika vavanotumira kutumira zvemukati.
CheteFans vaitaridzika kunge vakamirira kumucheto kwekutsakatika mwedzi wapfuura sezvo yakazivisa zvemukati mebonde zvaizofanirwa kutemerwa mutirongo zvinonzwisisika kuti zvidzivise kuverengerwa mazita nevakangwara kubhadhara ma processor. Saiti iyi, zvakadaro, yakadzosera kosi mukati memazuva mashoma, ichizivisa kuti "ichamisa" shanduko yemutemo, zvichitungamira mukugomera kwakawanda kwekusununguka kubva kune vanogadzira zvemukati vanoita mari yavo kutengesa fungidziro pane ino saiti nevatengi.